Kulo lonke uhambo lwakhe lwama-80 aluhlaza, uGeorge Michael wahlala eqinile njengokuba mhlawumbi i-pop-rock-singer-songwriter. Ukunyaniseka kwakhe kunye nomxholo ogqithiseleyo womculo wanikela umculo weWham !, i-duo yena wasungula ebuntwaneni u-Andrew Ridgeley, kwaye waqhuba impumelelo yakhe enkulu njengomculi wedwa. Abagxeki baye bahlala bephuza ukuqonda ukukhanya kweemculo zomculo oku kungabonakali, kodwa kwiminyaka ukususela kwakhe, umculo kaMichael uye wabanjwa ngenxa yokwakha ngokuchanekileyo. Nanku ukubukeka kwexesha elifanelekileyo kwiingoma eziphezulu zomculi ukusuka kwiintsuku zakhe kunye noWham! kunye nokuqhutyelwa kwakhe kwe-'80s career '.
Nangona "iinyawo ezinetyala zingenaso isigqi" kunye ne-blastingly cheesy chexy saxophone kule ngqungquthela isoloko ibeka amazinyo amacaleni, ayikho into ephikisayo le ngoma yanika abaphulaphuli umbono wabo wokuqala kaGeorge Michael njengomculi we-pop. Imizamo yakhe ngeWham! ngaphambili bekuncinane kakhulu malunga nokucwangciswa, kodwa xa uMichael ethatha ingqalelo ekuphenduleni izinto ezingaphezulu kwabantu abadala abadala, ubuchule bakhe bubukeka bubala ngakumbi. Ukuba unakho ukungathandabuzeki ngokumalunga namandla okuhlala kulo mzila, ufuna kuphela ubungqina beenguqu ezininzi ezikhutshweyo ezingafaniyo ezidlulileyo kwiminyaka, kubandakanye into emangalisa ngamanye ama-pop-up of song song Ben Folds noRufus Wainwright .
Kule nombolo engabonakaliyo, uMichael uyazibhokoxa ngeengoma zomculo zentombazana, kwaye mhlawumbi akuzange kubekho isandi esinjalo. Njengengoma yakhe engcono, uMichael ubonisa i-knack engenangqondo yokudibanisa iindinyana eziqinileyo, ezichukumisayo kunye ne-chorus. Ndenze umsebenzi omhle wokungaxabisi le ngoma xa ndisemncinci, kodwa ngoku ukuba ndikhulile kunye neendlela zokuziphulaphula malunga noko kukuphulaphula, ndingumdlali osisigxina. U-Michael ohluke ngokupheleleyo ngo-1990, obizwa ngokuba yi-"Freedom," uye wafumana ingqwalasela engakumbi kunokuba igama layo lingu-1984, kodwa nangona ingoma yangaphambili yayikude kakhulu e-UK nase-US. Kufuneka ube nento enokuyenza kunye nevidiyo yevidiyo ye-supermodel.
Abanye banokungavumelani, kodwa engqondweni yam, le ngoma evela ngo-1984 yenza i-Big It is Wham! Ingoma yokuqala kaGeorge Michael ingoma yinto engathandabuzekiyo, ingowokuqala ayizange iphazamise i-cheesy saxophone njengokuba "Ukukhathazeka ngokungathandabuzekiyo" okanye ubuncwane obugqithiseleyo (epheleleyo ne- Doris Day reference) njengokuba "Vukani Ngaphambi Kokuya-Hambani." Nangona i-synthesizers yexesha, i-single features features tight, iingoma ezicacileyo kunye nomnye wamazwi kaMikayeli ayenziwa ngokugqithiseleyo kwi-stint yesiqingatha se-duo. Ukususela kwivesi ukuya kwi-chorus, oku kungokuthi i-pop yegolide. Xa uMichael ekholelwa, "Uthi undixelele ... Kutheni ndisebenza nzima kuwe," akunakwenzeka ukuba abaphulaphuli bangayihoxisi ukuphakama kwamagama kaMichael. Ngokuqinisekileyo, intsalela yama-80s yaqhubeka ibonisa ukuba uMichael wayengenayo i-fluke.
Ukususela ekuvuleni kwayo kwendlela yokucwangcisa, le nto ingqungquthela ye-sophistipop aura ifaka i-sophistipop aura eselungele ukulungelelanisa noMichael ngaphezu kokuhamba kwayo, iinzame eziphezulu. Nangona le ngoma yayingabonwa kakhulu kwi-US ekukhululweni kokuqala-kwaye ayizange ibe yinto ephazamisayo kuyo yonke into nakwi-rerelease ngo-1985 no-1986 - sele isuke ibe yi-80s pop classic kungakhathaliseki ukuba iYuletide inomxholo. UMichael uye wahlala ebhala amazwi akhe anengqiqo ngokuphathelele intlungu kunye nokulangazelela, kwaye udlala ngokugqithiseleyo amandla akhe omculo kunye nolwazi apha. Kwakhona, ukuba iinguqulelo ezininzi zikunceda ukuxelela ibali lempembelelo yengoma, kwakhona kwakhona uphawu lukaMichael lwe-pop olumangalisayo lubethelwa ngokuqhubekayo.
Nangona le nto ingu- Aretha Franklin itunes - ngokubonakala kwayo kwi-albhamu yakhe ene-1986 kwaye ngokuqhelekileyo yayifumana ukuhlawulwa okuphezulu ngexesha lokukhululwa kwayo - ngokuqinisekileyo uMichael wenza inxaxheba ekhethekileyo ekuphakameni kwesi sigqeba sokuphefumula komphefumlo-moya esiza kufuphi nozuko lweendaba ezilungileyo . UMikayeli ngaphezu kokuzibamba kunye noMongameli weMphefumlo apha, ebonisa ukuxhomekeka kwakhe kunye nokunyaniseka kwefuthe njengezwi. Kwaye nangona le ngenye yezihlandlo ezimbalwa uMikayeli ongeyena uqobo lwakhe ekubhaliseni ingoma yomnye umntu, utyhila ingqiqo eqinileyo yokwenza oko. I- R & B iyambulela emveni kwayo, uMichael wenza uninzi lwe-duet kunye nesinye isithixo sakhe sokucula. '80s pop in best.
Nangona uMichael wenza into ephosakeleyo uElvis Presley yokuzenza ngathi udlala igaritha kwividiyo yomculo oyimifanekiso yale ngoma, umxholo ngokwawo ulwabiwo olumangalisayo lweBoDddley ngentsimbi engaqhelekanga kodwa esebenzayo noMichel's smmmering sensibility. Unyawo-unqamle kunye nokudlulela, oku kudlalwa ngokubhaliweyo kukubangela ukuba, ngokuphawulekayo, ukwenza ixabiso elincinci, elincinci lokubaluleka kweLeb Bizkit ngelo phepha eliphefumlelweyo le-90 le ngoma. Okungadingeki ukuthetha, eyadlula ngokukhawuleza, kodwa ukuphakama okukhulu kukaMichael njengomculi we-solo kuye kwamenza indawo engapheliyo kumculo we-pop ngaphaya kweminyaka elishumi yomsebenzi wakhe oyintloko. Ukuxubha ngokugqithisileyo.
Olunye uhlobo lweengoma ezingenakukhunjulwa ukusuka kuMichael u-smash 1987 I-albhamu yokholo , "uBawo umfanekiso" ushukumisa ukuphamba okukrakra, njengento yokudibanisa zonke izinto zohlobo kunye nomfanekiso kaMichael wokuxhaphaza ngokobulili kweso sikhundla kwinto engaphezulu. Kodwa akukho nanye yale mibonakalo yokudideka ngokubhekiselele kwisondo ngokugqithiseleyo, njengokuba uMichael ubhekene ne-pop-transcendence ngokunyanzelayo eqhubeka evula i-ante. Ibhuloho ende ende yeengoma iminye yezona zihlandlo ezithandekayo zemihla ngemihla yama-80s, ukwandisa ibe yinto enhle kakhulu, ikhula ngokugqithiseleyo: "Ngoko ukuba ukhumbule abo baqambe amanga / bathi ngubani owakhathalelayo kodwa wahamba njengoko ukhale / Uhle ', ungacingi ngami / ngenxa yokuba konke ndandifuna ... kusemandleni akho. " Ukuchaneka kwepop okulibalekiweyo.
UMichael wayezimisele ukwenza umngeni kwiintlobo ezahlukeneyo ze-albhamu yakhe ye-albhamu ebonakalayo, ininzi yabo yesondo, kodwa ekudityeni komdaniso othe wancinci we-80s, ubonisa ukulungiswa kwemimoya ngenxa yokuzimisela kwakhe okunciphisa izinto. Omnye uza kuba nzima ukufumana ithamo lomculo wep pop elincinci kuneli, kodwa njengesiqhelo, uMichael akaxhomeki kuphela kwi-gimmickry. Ukusebenza kwakhe ngokuzimela apha kwindawo eqinile kaMichael njengomnye weengoma ezigqwesileyo kunye neengcweti zee-80s. Akukho mntu uza kumangalela nayiphi na into ebalulekileyo kaMichael kusukela ngo-1987 ukuya ku-1988 yokungaphantsi kwezinto ezingenakulungiswa, kodwa ngandlela-thile lo mculi uphephe ukulawula ukubethelwa ngokugqithiseleyo kubalwa okanye kumatshini. Emotionally, eli lililo liye lafikelela kufutshane.
Iingoma eziphezulu ze-Whitesnake ze-80s
IAsia eziphezulu zee-80s
Ukuzivocavoca ekuchonzeni izivakalisi ezakhiweyo
Hochdeutsch - njani amaJamani athetha ulwimi olunye